कोठामा वालपेपर राख्न कति खर्च लाग्छ? के छ फाइदा? :: समिक्षा अधिकारी :: Setopati
वालपेपर विभिन्न रङ, बुट्टा र प्रकारमा पाइन्छ। सामान्यतया इँटा, ढुंगा, काठ, मार्वल, जीव–जनावर, प्राकृतिक दृष्यलगायत एक सयभन्दा बढी प्याटर्न (बुट्टा) भएका रेडिमेड वालपेपर उपलब्ध छन्। यसको मूल्य मोटाइअनुसार फरक पर्ने भए पनि हाम्रो बजारमा सामान्यतया एकै आकारको पाइन्छ।
अर्डरमा पनि बनाउन सकिन्छ वालपेपरः
(यो स्टोरी सेतोपाटीमा पहिलो पटक २०७७ फागुन ११ गते प्रकाशित थियो)
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १, २०७८, ०२:००:००